12 Volt Power Adapter, 12 Volt AC Power Adapter, 12 Volt DC Simba Adapter Mupi Kubva kuChina
Home > Products > AC DC Simba Adapter > 12V AC DC Inoshandura Simba Adapter
Zvigadzirwa zve 12V AC DC Inoshandura Simba Adapter , isu tiri vashandi vanobva kuChina, 12 Volt Dc Simba Adapter , 12 Volt Simba Adapter vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve 12 Volt Ac Adapter R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Misiyano uye hukama pakati pesimba adapt uye majaja  Bata Ikozvino
ERP CEC-VI KUSVIRA magetsi adapta iri nyore kutakura  Bata Ikozvino
Ndeupi musiyano pakati peadhaputa nekuchinja magetsi  Bata Ikozvino
Power adapter ye IT indasitiri mutauri indasitiri  Bata Ikozvino
Intelligent magetsi magetsi Anochinjika Adapter  Bata Ikozvino
Kunyanya yakarongedzwa fo 40-72W madziro emagetsi emagetsi adapta  Bata Ikozvino
LED wholesalers 12V5A 60W Wall-Gomo AC / DC Simba.  Bata Ikozvino
Izvo zvakafanana pakati pemadziro adapta uye desktop adapta?  Bata Ikozvino
Ndeapi iwo ma adapter emagetsi anoshandiswa?  Bata Ikozvino
12V 4A Inochinjika plug plugins Wall Mount Charger  Bata Ikozvino
12V 4.5A Inochinjika plug plugins Wall Mount Charger  Bata Ikozvino
12V 5A Inochinjika plug plugins Wall Mount Charger  Bata Ikozvino
12V 3.8A Inochinjika plug plugins Wall Mount Charger  Bata Ikozvino
12V 5A AC DC Wall Gomo Gomo Adapter Ine UL62368  Bata Ikozvino
12V 4A AC DC Wall Gomo Gomo Adapter Ine UL62368  Bata Ikozvino
AC Adapter yakafanana AC Charger?  Bata Ikozvino
Kupa yakakwirira-mhando yekuchinja modhi magetsi  Bata Ikozvino
12V Washington DC  Bata Ikozvino
Iko kupi ine Adapter madziro Gomo reEU plug  Bata Ikozvino
Unoshandisa sei DC magetsi?  Bata Ikozvino
Iko kune Wall Mount Power adapta ye72  Bata Ikozvino
Misiyano pakati pemagetsi adapura uye majaja: Iyo adapta yemagetsi ndeyekushandura, inodzokorora uye voltage yemagetsi inoshandura, kuburitsa iri dc, mune yekusangana nemagetsi kunogona kunzwisiswa sekumanikidzwa kwakaderedzwa kwemagetsi magetsi,...
ERP CEC-VI KUSVIRA magetsi adapta iri nyore kutakura
ERP CEC-VI KUSVIRA magetsi adapta iri nyore kutakura: 240V AC kusvika 12VDC 1Amp (1000mAh) Simba adapta / plug pack ine 1.5m tambo yakagumiswa ine 2.1 DC plug (2.1ID x 5.5OD x 10L). Komputa dhizaini ine yakakwira yazvino yakarongedzwa kubuda....
Ndeupi musiyano pakati peadhaputa nekuchinja magetsi
Ndeapi mabasa eadhaputa yemagetsi? . (2) isa adapta muhombodo yakakura-yekuyedza bhavhu kuti isvike mubaini yakakodzera diki-rekuyedza bhobho. Nenzira iyi, chete yakakura-kugona rotor uye seti yeadhapital inodiwa kuti uite zvinodiwa. AC yekuisa...
Ndeapi mabasa eadhaputa yemagetsi? Chinhu ichi chinoshandurwa plug magetsi adapta anoshandiswa zvakanyanya muindasitiri automation control, mauto indasitiri michina, magetsi ekutsidzira michina, mwenje LED, maindasitiri ekutonga, michina...
Intelligent magetsi magetsi Anochinjika Simba Adapter tsananguro: Inochinjika plug simba adapter, rinokanganisa pasi rese ac plug, 30w madziro 12v 3A 3000ma ac dc inomira magetsi magetsi adapuro ne eu us au plug inogona kubvaruka, Isu tiri OEM...
Kunyanya yakarongedzwa fo 40-72W madziro emagetsi emagetsi adapta
Kunyanya yakarongedzwa fo 40-72W madziro emagetsi emagetsi adapta Iye zvino mudzimba dzese muchave nemidziyo mikuru nemidiki yemagetsi, zvishandiso zvemagetsi, kwete kubva pamazana zana akavhurwa magetsi magetsi uye zvimwe zvigadzirwa zvekubatsira,...
LED wholesalers 12V5A 60W Wall-Gomo AC / DC Simba. Iye zvino mudzimba dzese muchave nemidziyo mikuru nemidiki yemagetsi, zvishandiso zvemagetsi, kwete kubva pamazana zana akavhurwa magetsi magetsi uye zvimwe zvigadzirwa zvekubatsira, nhasi...
Izvo zvakafanana pakati pemadziro adapta uye desktop adapta?
Izvo zvakafanana pakati pemadziro adapta uye desktop adapta? Kune plug-mu madziro magetsi adapter uye desktop desktop adap. Plug-in wall wall adapes anozivikanwawo se madziro emadziro magetsi adapter.Pachokwadi, zvinogona kutsanangurwa kungoti...
Unoshandisa sei DC magetsi? Iye zvino mudzimba dzese muchave nemidziyo mikuru nemidiki yemagetsi, zvishandiso zvemagetsi, kwete kubva pamazana zana akavhurwa magetsi magetsi uye zvimwe zvigadzirwa zvekubatsira, nhasi zvakanyanya zvichinzi ndiro...
12V 4A Inochinjika plug plugins Wall Mount Charger
12V 5A AC DC Wall Gomo Gomo Adapter Ine UL62368descript: Iyo inogona kugadzirwa kumadziro emhando yemhando kana dhesiki-yepamusoro mhando maererano nezvaunoda. Kugara kuripo ikozvino dhizaini iyo inoshanda zvakakwana kune zvigadzirwa zvebhatiri....
12V 4.5A Inochinjika plug plugins Wall Mount Charger
12V 5A Inochinjika plug plugins Wall Mount Charger
12V 3.8A Inochinjika plug plugins Wall Mount Charger
12V 4A AC DC Wall Gomo Gomo Adapter Ine UL623686V 3A Battery Chitaurire Ine neL tsananguro: Iyo inogona kugadzirwa kumadziro emhando yemhando kana dhesiki-yepamusoro mhando maererano nezvaunoda. Kugara kuripo ikozvino dhizaini iyo inoshanda...
Ko AC Charger yakafanana magetsi adapta? Chero charger yakabatirirwa kumadziro, uye isina kudzimwa pachigadziko, ichiri kushandisa imwe magetsi , kunyangwe ikasaburitswa mumudziyo unonzi uchajaira. Kushandiswa kwemagetsi ekunze kunotendera...
Kupa yakakwira-mhando yekuchinja modhi magetsi 240V AC kusvika 12VDC 1Amp (1000mAh) Simba dhizaini / plug pack ine 1.5m tambo yakamiswa ne 2.1 DC plug (2.1ID x 5.5OD x 10L). Komputa dhizaini ine yakakwira yazvino yakarongedzwa kubuda. Chiremera...
12V Washington DC 240V AC kusvika 12VDC 1 Amp Power adapter / plug pack ine 1.5m tambo yakagumiswa ine 2.1 DC plug. Inokodzera magetsi magetsi kune ako emagetsi zvigadzirwa senge modems, wachi, maprinta, mwenje ye LED, kamera dzekuchengetedza,...
Unoshandisa sei DC magetsi? Kana magetsi edu asina kusangana nemagetsi ekugadzirisa nharembozha yako, unogona kutibvunza kugadzira uye kugadzira yakagadziriswa imwe.Kushandiswa kwekunze kwemagetsi kunobvumira kutakurika kwemidziyo yakashongedzwa...
Iko kupi neWall Mount Power adapter 72W: Vakakura nekuda kwehukuru hwenyama hwezvinhu zvavanoda. Nehunyanzvi nyowani, uye emagetsi ekudzikisa masimba, mamwe maAdap adapt aya haachaita izvo, asi kumishini yakakura iyo inogona kuve nyaya yemakore...
China 12V AC DC Inoshandura Simba Adapter Vatengi
magetsi adapta kubva kune simba mushanduri, rectifier redunhu, ganda kuumbwa. DC tambo inobatanidza dhayamita (d) iri 2.1mm, dhayamita (D) iri 5.5mm, ukobvu (B) ndeye 10mm. 12V magetsi adapta yakakwirira-kumhanya kushanda, yakasimba, kwete nyore kune yakaipa. Aya masimba adapta emagetsi zvinhu: saizi yechigadzirwa: 74 * 30 * 42mm, diki diki, yakagadziriswa, yakaiswa chisimbiso zvakakwana, yakapusa kutakura.cost-ufanisi yakavakirwa-mukati oVerVoltage, pamusoro pezvazvino uye zvipfupi kudzivirirwa kwedunhu. Inoshandiswa kwazvo mumadhijitari, mwenje we LED, nhanho yekuvheneka, kuchengetedza, dzimba dzekushandisa uye zvimwe zvigadzirwa, ndiyo inonyanya kushandiswa muindasitiri yemagetsi.Vanogadzira zvine simba kupesana nekupindira, kuve nechokwadi chekushandiswa kwezvigadzirwa zvehupenyu hwakareba, kuburikidza neEMC test, ripple ≤ 50MV. Inoshandiswa kwazvo muMonitor, router uye zvimwe zvigadzirwa.Output conVentional Voltage 5V 12V 24V 36V 48V, imwe yacho inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.